Inokosha uye Nyore Magetsi Wiricheya Sarudzo
Usati watenga magetsi emagetsi wiricheya, bvunza chiremba wako wepanyama kana chiremba kuti uve nechokwadi chekuti chero mibvunzo yauinayo inopindurwa zvizere. Iwe haugone kungodzosera nyowani wiricheya kana isingaenderane nezvaunoda, saka unofanirwa kushopota uye kuenzanisa mitengo.
Medicare uye Inishuwarenzi vanopa havazotsiva mavhiripu kwemakore akati wandei kana iwe uchinge watenga kunze kwekunge paine shanduko mune yako yemuviri mamiriro.
Uri Wako Mobility Zvinodiwa Kugutsikana Nesimba wiricheya?
Simba wiricheya inogona kunge isiri iyo yakanyanya kunaka sarudzo kune yako Mobility zvinodiwa, bvunza chiremba wako. Kana iwe uchikwanisa kuzvimanikidza iwe mu wiricheya yemawoko, unogona kusawana simba wiricheya kubva kuMedare kana wako inishuwarenzi mupi. Kana iwe uchida kuwana nzvimbo dzakaomera wiricheya yemawoko kumanueuver, ipapo simba wiricheya inogona kunge iri nani sarudzo. Simba mavhiripu inokwanisa kuchenesa zvikumbaridzo zvakakwirira se3 inches.
Kana uchikwanisa kufamba kushandisa tsvimbo mumba mako, pamwe haungakwanise kuwana simba wiricheya. Scooter emagetsi haana kudhura uye anogona kupa Mobility panze. Iwo maforamu akakurisa anovapa iwo akapamhama anotenderera nharaunda iyo inonetsa kufambisa munzvimbo dzakasimba. Basa rinorema scooter inogona kutakura zviremu zvakakwirira kunge mazana mashanu emamirioni.
Kana chimiro chako chemuviri chichiita kuti zviome kupusha a wiricheya yemawoko kana kupinda kana kubuda musimba wiricheya, ipapo simba wiricheya ichave yako yakanyanya kunaka sarudzo. Kana yako Mobility dambudziko nderechigarire kana rinokonzerwa nechirwere chinozonyanya kuwedzera mune ramangwana, ndipo pauchazodawo simba wiricheya.
Ndeipi Simba Rakanakisisa wiricheya Kune Zvaunoda?
Kune maviri marudzi enjini mavhiripu, chimiro chemotokari chenguva dzose wiricheya inozivikanwawo sesimba wiricheya uye izvo mavhiripu ine simba-base inosungirirwa kune wiricheya. Kana iwe uchinyanya kusununguka ne wiricheya yemawoko asi unoda mota yemagetsi, simba wiricheya ine dhizaini yakafanana.
Simba-base wiricheya iri kumberi zvakanyanya maererano nemaitiro asi haina kutakurika sesimba rehuremu hwekurema wiricheya.
Simba-chigadziko mavhiripu kupa simba uye kuchinjika. Iyo chigaro chakabatanidzwa kune yakasimba vhiri base uye iwe unokwanisa kutora muchina uye kuisa muchigaro chitsva kana chako chimiro chemuviri chichiwedzera kuipa mune ramangwana.
Zvakare zviripo zviripo Basa rinorema mavhiripu iyo inogona kutakura kusvika pamazana matanhatu nemakumi mashanu nemashanu pamatani akakurisa. Simba-chigadziko mavhiripu zvinorema uye zvinoda muchina wekusimudza kuti uzviise mumotokari yako.
Murapi wako wepanyama kana chiremba anogona kukubatsira kusarudza magetsi wiricheya zvinonyatsokodzera zvaunoda.